လက်စွပ်ဝတ်ဆင်ပုံတွေက ပြောပြနေတဲ့ ယောင်းတို့အကြောင်း -
လက်စွပ်ဝတ်ဆင်ပုံတွေက ပြောပြနေတဲ့ ယောင်းတို့အကြောင်း
Posted on March 6, 2019 March 6, 2019 Author Yin Sandi Ko	Comment(0)
ပိုင်ရှင်ရှိတယ်ထင်ပြီး ခရပ်ရ်ှကြီး နောက်ပြန်လှည့်သွားမှ ဒုက္ခ 🥺
ယောင်းတို့ရေ…. ယောင်းတို့လက်ချောင်းလေးတွေမှာ ဆင်မြန်းတတ်တဲ့ လက်စွပ်ဝတ်ဆင်ပုံလေးတွေက အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုး သက်ရောက်နေတာကို သိပြီးကြပြီလား။ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့ ယောင်းတို့အားသန်ရာ လက်ချောင်းလေးတွေမှာ ဝတ်လိုက်ပေမဲ့ ဝတ်ဆင်ပုံအဓိပ္ပါယ်တွေကို သိနေတဲ့လူတွေက ယောင်းတို့အကြောင်းကို လွယ်လွယ်ကောက်ချက်တွေချလိုက်နိုင်ပါတယ်။ 🤧
ကိုယ်ကတော့ ဒီလက်စွပ်လေးကို ဒီလက်ချောင်းလေးမှာ ဝတ်လိုက်ရင် ပိုလိုက်ဖက်မယ် ၊ ပိုလှသွားမယ်လို့ ရိုးရိုးလေးပဲ တွေးပြီး ဝတ်လိုက်တာပေမဲ့ ယောင်းရွေးချယ်လိုက်တဲ့ လက်ချောင်းလေးပေါ်မူတည်ပြီး အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုး ကွဲထွက်သွားတာမို့ ဘယ်လက်ချောင်းလေးပေါ်မှာ ဝတ်လိုက်ရင် ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်မျိုးလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးမယ်နော် ယောင်းတို့။ 🤗
ယောင်းတို့ရဲ့ ညာဖက်လက်သန်းမှာ လက်စွပ်ကို ဝတ်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းဟာ ချစ်သူရည်းစားထားဖို့ စိတ်မဝင်စားသူတစ်ယောက်လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။ (အချေလက်လို့ပြောရင် မမှားပါဘူး 🙄 )
ယောင်းက ဘယ်ဖက်လက်သန်းမှာ လက်စွပ်ဝတ်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းက အိမ်ထောင်ပြုဖို့ဆန္ဒမရှိတဲ့သူဆိုပြီး အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ပါတယ်တဲ့ ယောင်းရေ။ (တစ်ကိုယ်တော် အပျိုကြီးလုပ်ချင်တဲ့ယောင်းတို့ ဒီလက်ချောင်းလေးမှာသာ ဝတ်ထားလိုက်တော့ 🥰)
ညာဖက်လက်သန်းကြွယ်မှာ လက်စွပ်ဝတ်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းက စေ့စပ်ထားပြီးသားလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ (မှားဝတ်ထားမိတော့လည်း လူထင်ကြီးခံရနည်းသလား 😜)
ဘယ်ဖက် လက်သူကြွယ်မှာ ဝတ်ဆင်ထားရင်တော့ ယောင်းတို့က လက်ထပ်ပြီးသားပါတဲ့။ (ဒီလက်မှာ မှားဝတ်ရင် ရှော့အကြီးကြီးရှိတယ်နော် 😬)
ယောင်းရဲ့ ညာဖက်လက်ခလယ်မှာ လက်စွပ်ဝတ်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းကအရာရာကို တန်ဖိုးထားတတ်သူ ၊ တာဝန်ယူလိုစိတ်ရှိသူလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဘဝကို လေးလေးနက်နက်ဖြတ်သန်းနေပြီး အမှားအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သူလို့လည်း အဓိပ္ပာယ်ရပါသေးတယ်ယောင်းရေ။ (ကြည်ညိုလေးစားခံချင်ရင် ဒီလက်မှာသာဝတ်ထားလိုက်တော့ 🤗)
ယောင်းတို့ရဲ့ ဘယ်ဖက်လက်ခလယ်မှာ လက်စွပ်ကို ဝတ်ဆင်ထားရင်တော့ ယောင်းက လေးနက်တည်ကြည်မှုနဲ့ တာဝန်ယူလိုမှုကို လိုလားသူတစ်ယောက်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်။
ညာဖက်လက်ညှိုးမှာ ဝတ်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းက တစ်ကိုယ်ရေ တစ်ကာယသမားပါတဲ့။ (အပျိုရီးဒေ :P) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိသူလို့လည်း ယူဆနိုင်ပါတယ်တဲ့ ယောင်းရေ။ (စင်ဂယ်ယောင်းတို့ လက်မှားဝတ်ထားမိရင် လက်ညှိုးကိုသာ မြန်မြန်ရွှေ့ဝတ်ပါတော့ 🤣)
ယောင်းတို့ရဲ့ဘယ်ဖက်လက်ညှိုးမှာ လက်စွပ် ဝတ်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းတို့က အိမ်ထောင်မပြုရသေးဘူးလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ အိမ်ထောင် မပြုသေးဘူးပဲ ပြောတာနော်.. ရဲဇား ရှိမရှိ မပြောပူး :3 (ရေလာမြောင်းပေးလုပ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးလက် 🤣)
ယောင်းတို့ရဲ့ ညာဖက်လက်မမှာ လက်စွပ်ဝတ်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ယောင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့လူတိုင်းကို လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လို့လည်း အဓိပ္ပာယ်ရပါသေးတယ်နော်။ (ဝတ်ထားမိတော့လည်း လူရှိန်တာပေါ့😎)
ဘယ်ဖက် လက်မမှာဝတ်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းတို့က တခြားလူတွေကို အလွယ်တကူ ဦးဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ပါတယ်တဲ့ ယောင်းတို့ရေ..
Related article>>>ကိုယ်ဝတ်တဲ့ဝတ်စုံနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ရတနာကို ဘယ်လိုရွေးရမလဲ?
လက်စွပ်ဝတ်ရတာမကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ယောင်းတွေကိုတော့ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်နေချင်သူ ၊ လွတ်လပ်ခြင်းကို မြတ်နိုးတဲ့သူ၊ ချုပ်ချယ်တာကို မကြိုက်တဲ့သူ ၊ ဖြစ်လာသမျှကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်လိုသူလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်။
ကဲ…ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ယောင်းတို့ဘယ်လက်ချောင်းမှာ လက်စွပ်ဝတ်သင့်လဲဆိုတာကို ရဲရဲကြီး ဆုံးဖြတ်ပြီးလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်နော်။ ကိုယ်တိုင် လက်ချောင်းရွေးဝတ်နိုင်သလို သူများတွေဝတ်ထားတာကြည့်ပြီးလည်း အပျော်သဘော စပ်စုစိန်လုပ်လို့ရတာပေါ့ 😎
References : That’s Life , Quora , Fashionisers
ပိုငျရှငျရှိတယျထငျပွီး ခရပျရျှကွီး နောကျပွနျလှညျ့သှားဦးမှ ဒုက်ခ 🥺
ယောငျးတို့ရေ…. ယောငျးတို့လကျခြောငျးလေးတှမှော ဆငျမွနျးတတျတဲ့ လကျစှပျဝတျဆငျပုံလေးတှကေ အဓိပ်ပာယျအမြိုးမြိုးသကျရောကျနတောကို သိပွီးကွပွီလား။ အမှုမဲ့အမှတျမဲ့နဲ့ ယောငျးတို့အားသနျရာ လကျခြောငျးလေးတှမှော ဝတျလိုကျပမေဲ့ ဝတျဆငျပုံအဓိပ်ပါယျတှကေို သိနတေဲ့လူတှကေ ယောငျးတို့အကွောငျးကို လှယျလှယျကောကျခကျြတှခေလြိုကျနိုငျပါတယျ။ 🤧
ကိုယျကတော့ ဒီလကျစှပျလေးကို ဒီလကျခြောငျးလေးမှာ ဝတျလိုကျရငျ ပိုလိုကျဖကျမယျ ၊ ပိုလှသှားမယျလို့ ရိုးရိုးလေးပဲ တှေးပွီး ဝတျလိုကျတာပမေဲ့ ယောငျးရှေးခယျြလိုကျတဲ့ လကျခြောငျးလေးပျေါမူတညျပွီး အဓိပ်ပာယျအမြိုးမြိုး ကှဲထှကျသှားတာမို့ ဘယျလကျခြောငျးလေးပျေါမှာ ဝတျလိုကျရငျ ဘယျလို အဓိပ်ပာယျမြိုးလဲဆိုတာ ဖျောပွပေးမယျနျော ယောငျးတို့။ 🤗
းယောငျးတို့ရဲ့ ညာဖကျလကျသနျးမှာ လကျစှပျကို ဝတျဆငျထားမယျဆိုရငျတော့ ယောငျးဟာ ခဈြသူရညျးစားထားဖို့ စိတျမဝငျစားသူတဈယောကျလို့ အဓိပ်ပာယျ ရပါတယျ။ (အခလြေကျလို့ပွောရငျ မမှားပါဘူး 🙄 )
ယောငျးက ဘယျဖကျလကျသနျးမှာ လကျစှပျဝတျဆငျထားမယျဆိုရငျတော့ ယောငျးက အိမျထောငျပွုဖို့ဆန်ဒမရှိတဲ့သူဆိုပွီး အဓိပ်ပာယျသကျရောကျပါတယျတဲ့ ယောငျးရေ။ (တဈကိုယျတျော အပြိုကွီးလုပျခငျြတဲ့ယောငျးတို့ ဒီလကျခြောငျးလေးမှာသာ ဝတျထားလိုကျတော့ 🥰 )
ညာဖကျလကျသနျးကွှယျမှာ လကျစှပျဝတျဆငျထားမယျဆိုရငျတော့ ယောငျးက စစေ့ပျထားပွီးသားလို့ ယူဆနိုငျပါတယျ။ (မှားဝတျထားမိတော့လညျး လူထငျကွီးခံရနညျးသလား 😜 )
ဘယျဖကျ လကျသူကွှယျမှာ ဝတျဆငျထားရငျတော့ ယောငျးတို့က လကျထပျပွီးသားပါတဲ့။ (ဒီလကျမှာ မှားဝတျရငျ ရှော့အကွီးကွီးရှိတယျနျော 😬 )
ယောငျးရဲ့ ညာဖကျလကျခလယျမှာ လကျစှပျဝတျဆငျထားမယျဆိုရငျတော့ ယောငျးကအရာရာကို တနျဖိုးထားတတျသူ ၊ တာဝနျယူလိုစိတျရှိသူလို့ ယူဆနိုငျပါတယျ။ ဘဝကို လေးလေးနကျနကျဖွတျသနျးနပွေီး အမှားအမှနျဝဖေနျပိုငျးခွားနိုငျသူလို့လညျး အဓိပ်ပာယျရပါသေးတယျယောငျးရေ။(ကွညျညိုလေးစားခံခငျြရငျ ဒီလကျမှာသာဝတျထားလိုကျတော့ 🤗 )
ယောငျးတို့ရဲ့ ဘယျဖကျလကျခလယျမှာ ဝတျဆငျထားရငျတော့ ယောငျးက လေးနကျတညျကွညျမှုနဲ့ တာဝနျယူလိုမှုကို လိုလားသူတဈယောကျလို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျနျော။
ညာဖကျလကျညှိုးမှာ ဝတျဆငျထားမယျဆိုရငျတော့ ယောငျးက တဈကိုယျရေ တဈကာယသမားပါတဲ့။ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုအပွညျ့အဝရှိသူလို့လညျး ယူဆနိုငျပါတယျတဲ့ ယောငျးရေ။ (စငျဂယျယောငျးတို့ လကျမှားဝတျထားမိရငျ လကျညှိုးကိုသာ မွနျမွနျရှဝေ့တျပါတော့ 🤣)
ယောငျးတို့ရဲ့ဘယျဖကျလကျညှိုးမှာ လကျစှပျ ဝတျဆငျထားမယျဆိုရငျတော့ ယောငျးတို့က အိမျထောငျမပွုရသေးဘူးလို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ (ရလောမွောငျးပေးလုပျဖို့ အသငျ့တျောဆုံးလကျ 🤣 )
ယောငျးတို့ရဲ့ ညာဖကျလကျမမှာ လကျစှပျဝတျဆငျထားမယျဆိုရငျတော့ အားကောငျးမောငျးသနျဖွဈတဲ့ စိတျဓာတျရှိတယျလို့ ယူဆနိုငျပါတယျ။ ယောငျးတို့နဲ့ပတျသကျဆကျနှယျတဲ့လူတိုငျးကို လှမျးမိုးနိုငျတယျလို့လညျး အဓိပ်ပာယျရပါသေးတယျနျော။ (ဝတျထားမိတော့လညျး လူရှိနျတာပေါ့ 😎 )
ဘယျဖကျ လကျမမှာဝတျဆငျထားမယျဆိုရငျတော့ ယောငျးတို့က တခွားလူတှကေို အလှယျတကူ ဦးဆောငျနိုငျတယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျသကျရောကျပါတယျ။
Related article>>>ကိုယျဝတျတဲ့ဝတျစုံနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ရတနာကို ဘယျလိုရှေးရမလဲ?
လကျစှပျဝတျရတာမကွိုကျနှဈသကျတဲ့ ယောငျးတှကေိုတော့ စိတျလှတျကိုယျလှတျနခေငျြသူ ၊ ခြုပျခယျြတာကိုမကွိုကျတဲ့သူ ၊ ဖွဈလာသမြှကို ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ရငျဆိုငျလိုသူလို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျနျော။
ကဲ…ဒီလောကျဆိုရငျတော့ ယောငျးတို့ဘယျလကျခြောငျးမှာ လကျစှပျဝတျသငျ့လဲဆိုတာကို ရဲရဲကွီးဆုံးဖွတျပွီးလောကျပွီထငျပါတယျနျော။ ကိုယျတိုငျ လကျခြောငျးရှေးဝတျနိုငျသလို သူမြားတှဝေတျထားတာကွညျ့ပွီးလညျး အပြျောသဘော စပျစုစိနျလုပျလို့ရတာပေါ့
Tagged engaged, Fun, Knowledge, Left, Married, meaning, right, ring, Single, spinster
Knowledge Love News
ခြံစည်းရိုးပိုက်လုံးတွေနဲ့ ထိုးဖောက်မိတာတောင် သေကံမရောက် သက်မပျောက်တဲ့ ပူစီလေး
Posted on March 20, 2018 Author Sugar Cane
အမလေး.. ကံကောင်းလို့ မသေ သံချောင်းတို့ အဖေပါလား ပူစီရယ်…
၂၀၁၉ မှာ သူငယ်ချင်းနဲ့ အတူလုပ်သင့်သော အရာများ
Posted on January 14, 2019 Author Sugar Cane
ဒါလေးတွေ Planner ထဲသာထည့်ထားလိုက်ပေတော့
Viber ကနေ စတစ်ကာ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲရင်း အိပ်မက်တွေအသက်ဝင်လာခဲ့သူ မသက်သက်မွန်
နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းသွားတက်မယ်ဆိုရင် ဒီ (၄)ချက်ကို သေချာလိုက်နာဖို့ လိုပါတယ်။